Thenga ngoku izithethi zeAmazon Echo ngezaphulelo kwihlazo | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Ezinye izixhobo
Emva kweenyanga zokulinda, umzuzu ufikile. Uluhlu lwezithethi lweAmazon Echo lwaziswa ngokusesikweni eSpain, Kunye nohlobo olusemthethweni lomncedisi we-Alexa ngeSpanish. Umzuzu ophambili kwizithethi zenkampani, eziqala ukwanda kumazwe aphesheya. Ukufika kwayo eSpain kubalulekile, kwaye ezinye iimarike ezinje nge-Italiya okanye iMexico kulindeleke ukuba zilandele kungekudala. Ukhuphiswano lweKhaya likaGoogle lulapha.
JKunye nezi zithethi zenkampani, kukwakho neZakhono ze-Alexa kunye nokudityaniswa kwezixhobo kwi-Alexa, phakathi kwazo apho sifumana izithethi okanye imivalo yesandi evela kuhlobo olubanzi lweempawu ezinje ngeBose, Sonos okanye Energy Sistem, phakathi kwezinye izinto ezininzi. Uluhlu lweAmazon Echo olufika eSpain lwenziwe zizithethi ezihlanu zizonke. Sithetha nganye nganye engezantsi.
3 IAmazon Echo Plus
5 IAmazon Echo Sub
Eyokuqala yeemodeli kuluhlu lokufika yile Amazon Echo Dot. Enkosi kubukho be-Alexa siza kuba nakho ukudlala umculo, siphendule imibuzo, sibalise iindaba, jonga uqikelelo lwemozulu, usete ii-alamu, ulawule izixhobo ezifanelekileyo zekhaya ledijithali nokunye okuninzi. Inomgangatho ophakamileyo wesandi, eyenza ukuba ilunge xa ​​umamele umculo
Enkosi kubukho be-Alexa, siya kuba nakho ukubiza abanye abantu nge-Echo sisebenzisa umyalelo welizwi. Ukongeza, kunokwenzeka ukuba uyixhume nezinye izixhobo zekhaya ledijithali. Inemakrofoni ezine xa zizonke, kunokwenzeka ukuba uyive naphina egumbini. Inokudityaniswa nezithethi ezisebenzisa iBluetooth, kodwa kunye nentambo ye-3.5mm.
I-Alexa ihlaziywa ngokuzenzekelayo isebenzisa iLifu, ngaloo ndlela ifaka imisebenzi emininzi kuyo. Ukongeza, enkosi kwizakhono ze-Alexa, sinokufumana ngakumbi kwesi sithethi sityikityo. Ixabiso lale Echo Dot zii-euro ezingama-59,99, kodwa ukumiliselwa kwayo eSpain Iyafumaneka ngexabiso elikhethekileyo lama-euro angama-35,99.
Imodeli yesibini yiAmazon Echo, enika igama layo kule ntsapho yezithethi ezikrelekrele. Kuyenzeka ukuba wenze zonke iintlobo zezenzo ezinjengokudlala umculo, ukufowuna, ukuseta ii-alam kunye nexesha, ukubuza imibuzo, ukufumana ulwazi malunga nemozulu, ukugcwala kwezithuthi kunye neziphumo zemidlalo, ukulawula ukwenziwa kunye noluhlu lokuthenga, ukulawula izixhobo zeKhaya ezihambelana nedigital izixhobo nokunye okuninzi. Ke sinokufumana okuninzi kuyo.
Singakucela ingoma, umculi okanye uhlobo kwiqonga lokusasaza njengeAmazon Music okanye iSpotify xa umamele umculo. Kuyenzeka ukuba udlale izikhululo zikanomathotholo okanye iindaba, Kuya kufuneka ubuze i-Alexa. Ikwasinika nethuba lokufowuna okanye ukuthumela imiyalezo kwabanye abasebenzisi ngesixhobo se-Alexa, ngaphandle kokuphakamisa umnwe. Kufuneka sisebenzise umyalelo welizwi kwaye sibuze umncedisi.
Kwisithethi sifumana itekhnoloji yeDolby, ukuhambisa amazwi acacileyo, ii-bass ezinzulu, kunye ne-crisp highs, nkqu nakwiivolumu eziphezulu. Umgangatho olungileyo wesandi, owenza isithethi esihle xa umamele umculo okanye ufowuna. IAmazon Echo ineemakrofoni ezisixhenxe zizonke, kunye nokuqhafaza kunye nokucinywa kwengxolo.
I-Alexa ihlaziywa rhoqo ngemisebenzi emininzi emitshas. Ukuze sikwazi ukusebenzisa ithuba lomncedisi ukwenza zonke iintlobo zezenzo, nditsho nokulawula ezinye izixhobo ekhayeni lethu, ezinjengezibane ezisendlwini, ithermostat okanye iswitshi kuyo.
IAmazon Echo inexabiso nge-99,99 ye-euro, nangona ngethuba lokumiliselwa kwayo eSpain wena Ungayithatha nge-euro ezingama-59,99 kuphela kolu nikelo. Ungaphoswa leli thuba!
Kwindawo yesithathu sifumana esi sithethi, eluhlobo oluthile oluphuculweyo lwangaphambili. Singacela i-Alexa ngazo zonke iintlobo zezenzo ngomyalelo welizwi. Siza kuba nakho ukukucela ukuba udlale umculo, ufunde iindaba, jonga uqikelelo lwemozulu, usete ii-alamu kunye namaxesha, lawula izixhobo ezifanelekileyo zasekhaya, fowunela nabani na onesixhobo se-Echo.
Esi sithethi sine-Zigbee yedijithali yolawulo lwasekhaya, enkosi apho kuya kwenzeka khona ukumisela kunye nokulawula izixhobo ngendlela elula nge-Alexa, ezinje ngezibane okanye iiswitshi. Ukongeza, isivamvo sobushushu esihlanganisiweyo siyafika.
Isandi yenye yezinto eziphambili kwesi sithethi, ngetekhnoloji yeDolby, enika isandi esilinganiselweyo nesomgangatho. Yonke into enxulumene nesandi inokuqwalaselwa kwi-Alexa app ngendlela elula. IAmazon Echo Plus ineemakrofoni ezisixhenxe zizonke nge-beamforming nengxolo yokurhoxisa itekhnoloji, yiyo loo nto esivumela ukuba siviwe ngalo lonke ixesha xa sisiya kwenza umyalelo welizwi kumncedisi. Enkosi kubukho beZakhono ze-Alexa, umncedisi uyaqhubeka ephucula ngokufunda imisebenzi emininzi emitsha.
Le Amazon Echo Plus inexabiso le-149,99 euro, kodwa kumsitho wokuphehlelelwa kwayo eSpain, Singayithenga nge-euro ezingama-89,99 kuphela kolu nyuselo. Isaphulelo esikhulu.
I-Echo Plus (i-2th Gen) -Umgangatho ophezulu weSandi kunye noMlawuli oDibeneyo weKhaya eliMnyama, ingubo emnyama eMnyama
IAmazon Echo Spot imele ubungakanani bayo obuncinci, eyenza kube lula ukuyisebenzisa nakweliphi na igumbi endlwini yethu. Nokuba kwitafile esecaleni kwebhedi okanye kwitafile eseofisini yethu. Isebenzisa ukuqondwa kwelizwi elikude ekuvumela ukuba wenze imisebenzi emininzi njengokujonga uqikelelo lwemozulu, ukuphonononga izinto eziza kwenziwa kunye noluhlu lweevenkile, okanye ukumamela iindaba, phakathi kwezinye izinto ezininzi.
Iyahambelana nezixhobo zeKhaya eliDijithali, ke sinokucela i-Alexa ukuba yenze izinto ngazo, njengokucima isibane okanye ukucima iswitshi, phakathi kwabanye. Ukongeza ekukwazi ukukucela ukuba udlale umculo okanye unomathotholo. IAmazon Echo Spot inesithethi esakhelweyo. Singasidibanisa isithethi ngeBluetooth okanye ngentambo yestereo ene-3.5 mm jack, isithethi sisinika amathuba omabini malunga noku.
Inomsebenzi womculo ohlukeneyo, oya kusivumela ukuba simamele umculo ngokulula kuwo onke amagumbi endlu. U-Alexa, okhoyo kwisithethi, funda rhoqo izinto ezintsha ngawo onke amaxesha. Yintoni eya kusivumela ukuba sifumane okuninzi kuyo.
Ixabiso lalesi sithethi nge-129,99 euro. Kodwa, kumsitho wokuphehlelelwa kwayo eSpain siyifumana Ixabiso elikhulu lee-euro ezingama-77,99. Ungayivumeli ukuba ibaleke!
IAmazon Echo Sub
Indawo yokugqibela esisifumana esi sithethi, iAmazon Echo Sub. Esi sixhobo sibonisa i-woofer eyi-152mm ene-100W yamandla kwaye ejonge ezantsi ejonge iibass ezityebileyo. Isandi esiguqukayo sesinye seempawu zayo ezintle, ukongeza kuncedo esinokuthi silungiselele kwaye silufake.
Ukusukela kule ngqondo, konke ekufuneka sikwenzile kukufaka iplagi kwiAmazon Echo Sub kumandla kwaye uvule iapp yeAlexa. Sidibanisa isixhobo kwaye sele sigqibile ngale nkqubo. Ke siya kuba nakho ukuyilawula ngokusebenzisa imiyalelo yelizwi ngalo lonke ixesha ekhaya.
Ukuphehlelelwa kwesithethi eSpain kucwangciselwe u-Okthobha u-30 eSpain. Ke kuya kufuneka ulinde kancinci ukuyithenga. Iya kuza ngexabiso le-129,99 euros ekumiselweni kwayo.
Ukongeza kwizithethi, IAmazon isishiya nale plug smart, Esiza kuba nakho ukulawula ngokulula sisebenzisa i-Alexa. Ndiyabulela kuyo, kuya kuba lula ukucima okanye ukucima izibane okanye izixhobo ezixhumeneyo ekhaya ngendlela elungileyo. Ukuqwalaselwa kunye nokufakwa kwayo kulula kakhulu, okuququzelela inkqubo.
Njengesithethi sangaphambili, ukumiliselwa kwayo akulindelwanga kude kube nge-30 ka-Okthobha. Iya kufika eSpain ngexabiso le-29,99 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Thenga ngoku izithethi zeAmazon Echo ngezaphulelo kwihlazo